Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Oo Maalmo Gudahooda Isaga Dab-qaaday Taageerada Xisbiyada KULMIYE Iyo WADDANI Ugu Dambayna Musharrax Cirro Ku Tilmaamay Madaxweynaha Baddalaya Siilaanyo | FooreNews
Home wararka Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Oo Maalmo Gudahooda Isaga Dab-qaaday Taageerada Xisbiyada KULMIYE Iyo WADDANI Ugu Dambayna Musharrax Cirro Ku Tilmaamay Madaxweynaha Baddalaya Siilaanyo
Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Oo Maalmo Gudahooda Isaga Dab-qaaday Taageerada Xisbiyada KULMIYE Iyo WADDANI Ugu Dambayna Musharrax Cirro Ku Tilmaamay Madaxweynaha Baddalaya Siilaanyo
“Xisbiga KULMIYE Waan Taageersanahay Muuse Biixina Waa Mushararxayga. Laa Musharrax Bacdal Muuse”…… “Musharraxa Siilaanyo Baddalayaa Waa Cirro, Ilaahay WADDANI Hagu Guuleeyo Talada”…Suldaan Maxamed
Hargeysa, Sept 23, 2017- (Foore)- Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo ka mid ah Madax-dhaqameedka waaweyn ee Somaliland ayaa maalmo kooban gudahood waxa uu Fagaare ka muujiyey taageerada uu u hayo xisbiyada KULMIYE iyo WADDANI oo uu midba mar bulshada horteeda ka sheegay sida uu u taageersan yahay kadib markii uu si cad Suldaan Maxamed muddo kooban gudaheed midba mar taageero u muujiyey labadaasi xisbi ee ku tartamaya doorashada Madaxweyne ee Dhawaan la filayo in ay ka qabsoonto dalka.
Suldaanka Guud ee Salaadiinta Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa marar badan sidan oo kale hore fagaarayaal kala duwan uga taageeray xisbiyada qaranka isaga oo kolba mid dhinaca saara wakhti xaraaradda siyaasadeed ee dalku marayso meel kulul maalmo koobanina innaga xigaan wakhtigii Ololaha doorashada Madaxtooyada.
12-kii Bisha ayay ahayd markii Suldaanka Guud ee Beesha Koonfurta Hargeysa si weyn taageero ugu muujiyey xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE wakhtigaasi oo uu xaflad ballaadhan kaga qayb galayay Suldaanku Huteel Maansoor oo xisbiga KULMIYE maalintaasi ku soo ban dhigayay Buugga Barnaamij siyaasadeedkiisa doorashada soo socota isaga oo maalintaasi Suldaan Maxamed si cad shaaca uga qaaday in uu ka tirsan yahay xisbiga KULMIYE oo uu taageeradiisa la barbar taagan yahay. Halka uu sidoo kalena arrin taasi ka duwan ku tallaabsaday Suldaanku saddex maalmood ka hor oo uu sheegay in uu taageerayo xisbiga Muxaaridka ah ee WADDANI mar uu safar ku tagay Magaalada Boorama.
Suldaan Maxamed Cabdiqaadir oo dadweynaha meel fagaare ah kala hadlayay mar uu wiiggan ku sugnaa Magaalada Boorama waxa uu yidhi: “Waxaan leeyahay Xisbigani (WADDANI) Xisbiga Guusha umadda qaata Alle haka yeelo. Madaxweynaha kala wareegi doona Xilka Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro Ilaahay idamkii. Waxaan leeyahay xisbiga WADDANI guul haku waaro. Waxaan leeyahay Ilaahay haku guuleeyo doorashooyinka oo waddanka ha u taabbo galiyo. Mid uun baan idiin sheegayaa Salaadiinta xisbiyadu way u wada baahan yihiin. Xisbi walba waannu la soconaa. Yaan la odhan maxaa u geeyay iyo caynkaa. Kii noo yeedha ee na casuumaba waannu u imanaynaa kii kale ee naga maarmana waan ka maarmaynaa. Kii naga aamusana waannu ka aamusi Codkuna waa meel uu Alle ogyahay iyo Aniga uun. Waxaan leeyahay dalkeenu maanta is baddal buu u baahan yahay. Nin dhan oo wasiir ah oo jago kugu haysta. Aabihiiba muu dhalan hadda marka aannu dhulka lahayn. Xukuumadda Siilaanyo wasiirrada ku jira waxaan leeyahay ee dhulka ka hadlaya waxaan leeyahay hadalku waxa uu idiin bannaan yahay marka aad wax ka garanaysaan taariikhdii Ingiriiskii iyo dhulkani sida uu ahaa aad dib u raacdaan. Ma aha inaad jagooyin yaryar nagu qabsataan, haddii aad sidaa yeeshaan oo aad jagooyin yaryar nagu qabsataan waan isku naallaa. Xisbiga WADDANI ilaahay guul waasac ah ha siiyo. Xisbiga Guusha ku soo baxa Alle haka yeelo. Dhallinyarada waxaan leeyahay waar WADDANI waa xisbigii wax idiin qabanayay ee taageera. Deeqihii waxbarasho ee dibadda ayaa furmi doona ”.
12-kii Bishan September mar uu Suldaanku ka hadlayay xafladdii daah-furka Barnaamij siyaasadeedka KULMIYE waxa uu Suldaanku yidhi sidan: “Barnaamij siyaasadeedka Xisbiga KULMIYE ee maanta halkan lagu qaybiyey aadbuu u qurux badan yahay. Doorashada dee dadku iskuma jiro. Kolkii hore anuu xisbina maan ahayn laakiin Saaka waxaan leeyahay xisbigaasi waan taageerayaa waanan la shaqaynayaa. Waayo Barnaamijkan uu soo ban dhigay waa barnaamij aad iyo aad looga soo shaqeeyey. Waxaan leeyahay laakiin yaanu innaga dhicisoobin barnaamijkaasi. Waa in uu sidiisa u shaqeeyaa. Xukuumadda umaddu isha ayay ku haysaa laakiin haddii ay gaabis noqoto annagu tan dambe ee soo socota uunbaanu sugaynaa. KULMIYE barnaamijkan waannu ku hambalyaynaynaa”. Sidoo kale mar uu dhawaan ka hadlayay xaflad xisbiga KULMIYE loogu sameeyey deegaanka Sallaxley waxa uu yidhi: “Laa Nabiya Cabdal Muxamed ayaa hore loo yidhi maantana anigu waxaan leeyahay Laa Musharrax Bacdal Muuse” isaga oo taageero u muujinayay xisbiga KULMIYE iyo Musharrax Muuse Biixi Cabdi.
Xaaladdan suldaanka ayaa ku soo beegmaysa wakhti Madax-dhaqameedka Somaliland guud ahaanba ay si weyn ugu dhex milmeen siyaasadda axsaabta qaranka waxaanse la ogayn halka ay salka ku hayso is badbadalka Suldaanka ku yimid.
Previous PostKumuu Ahaa Fanaankii Mulaxameystihii Abwaankii Cabdillahi Qarshe”W/Q Cumar Serbiya Next PostBuuggii Ay Qortay Hillary Clinton Oo Suuq Ballaadhan Dunida Ka Helaya Noqdayna Buuggii Loogu Iibsasho Badnaa Dunida In Muddo Ah!